Notanterahina androany Sabotsy 19 Oktobra 2019 ny “Asa tagnamaro” teto anivon’ny INSTAT sy ny Direction Générale Economie ary ny Direction Générale CREAM eto Anosy. Tonga nanotrona ny fotoana Andriamatoa Sekretera Jeneralin’ny Ministeran’ny Toekarena sy ny Fitantanam-bola.
Natao hanatsarana ny toeram-piasana ny asa tahaka itony. Ankoatra izany dia hampifandraisana ireo mpiasa izay samy variana any amin’ny birao misy azy avy. Farany, fandraisana anjara amin’ny fampandrosoana satria “izay tsy mandoto dia efa manadio ; fa ny manadio ny maloto no tena mandray andraikitra”.